बढुवा रोकिँदा प्रहरीमा खैलाबैला | PARDAFAS
Posted: May 26, 2014 in By Deepak Kharel
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल आफूसँगै सेवा प्रवेश गरेका डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निरन्तर प्रयासमा छन्। तर उनको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुँदै अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। तर उनीसँगैका डीआईजीको एआईजीमा बढुवा हुन सकेको छैन। अर्याल यस्तो हुन्छ भनेर आफूले ‘सपनामा पनि नसोचेको’ बताउँछन्।
अर्याल गत कात्तिक अन्तिममा आईजीपीमा बढुवा भएका थिए। उनको बढुवापछि उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अन्य १३ जना डीआईजी एआईजीमा बढुवा हुने दौडमा छन्। ६ महिनासम्म एआईजीमा बढुवा हुन नसक्दा तल्लो तहस मको बढुवा र सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ। प्रहरीको वृत्ति विकाससँगै संगठनका नियमित कामकारबाही चुस्त हुन सकेको छैन।
टिमवर्कमा चल्ने संगठनमा बढुवा र सरुवामा ढिलाइ हुनु प्रशासनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क महानिरीक्षक अर्यालको छ। ‘कमान्डमा चल्ने संगठनमा ओहदाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। खाली रहेका पदमा बढुवा नहुँदा धेरै अप्ठयारो भएको छ’, आईजीपी अर्यालले भने, ‘अब चाँडै बढुवासरुवा प्रक्रिया अघि बढ्छ होला।’ उनका अनुसार नयाँ नियमावलीले व्यवस्था गरेको मापदण्डअनुसार अब्बल अंक ल्याउने डीआईजी एआईजीमा बढुवा हुनेछन्।
अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कोठैपिच्छै एउटै अनुमानको खेती भइरहेको छ। एआईजी को को होलान्? प्रहरी मु यालयका विभिन्न विभाग एआईजी बढुवाको दौडमा रहेका डीआईजीहरूले नै चलाइरहेका छन्। विभागमा नयाँ योजना र कार्यान्वयनभन्दा बढुवामा आफू परिने हो वा होइन, बढुवा कहिले हुने हो भन्ने अडकलकै चर्चा बढी छ। यो अवस्थाले प्रहरी मु यालय ६ महिनादेखि तनाउमा रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउँछन्। बढुवा रोकिँदा एआईजीसँगै एसएसपी, एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरमा असर परेको छ।
संगठन चुस्त पार्न भनिए पनि आफूअनुकूल बढुवा गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सातौं पटक संशोधन र प्रहरी नियमावली २०४९ पनि १६ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ समेत विधेयक समितिबाट पास भएकै भोलिपल्ट संशोधन हुनु त्यसकै उदाहरण हो। बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहने प्रहरी मात्रै एउटा सुरक्षा अंग हो। किन प्रहरीमा मात्रै बढुवा र सरुवामा यस्तो बबन्डर हुन्छ त? पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘राज्यले प्रहरी संगठन बलियो बनाउनुको साटो कमजोर बनाएर स्वार्थ अनुकूल चलाउन खोज्दा यस्तो हुन्छ।’ ऐनमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयसमेत राजनीतिक स्वार्थमा नियमावलीमा संशोधन हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘संगठन चुस्त, दुरुस्त र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि समयानुकूल नियम बनाउनु र फेर्नु स्वाभाविक हो तर यहाँ आवश्यक कुरै छुटाएर स्वार्थका कुरा रा ने परिपाटी नै बस्यौं’, खरेलले भने।
प्रहरीमा बढुवा रोकिँदा जवानदेखि एआईजीस मको वृत्ति विकासमा असर परेको छ। प्रहरी संगठनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभन्दा नियमावली बनाउने र संशोधन गर्ने नाममा भएका अधिकार पनि कटौती भएको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ ले मु यालयमा रहँदै आएको बढुवा बोर्डसमेत गृह मन्त्रालयमा पु:याएको छ। पूर्वआईजीपी खरेल फौजी संगठनलाई अधिकार दिन र दुरुपयोग भए कारबाही गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन्।
पूर्वगृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम प्रहरीको बढुवा प्रक्रियामा भएको ढिलाइले कमजोर पद्धति विकास हुने खतरा बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रहरीमा एआईजीदेखि तल्लो तहस मको नियमित बढुवा रोकिँदा संगठनमा नकारात्मक असर पुग्छ। उनले भने, ‘कर्मचारीको वृत्ति विकास नै संगठनको विकासको महत्त्वपूर्ण औजार हो। त्यही रोकिए त दीर्घकालस म त्यसको असर देखिन्छ।’